Mooshinkii Kadhanka Ahaa Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Ayaa waxaa loo Gudbiye Maxkamadda sare – STAR FM SOMALIA
Guddoonka Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa saaka si rasmi ah Maxkamadda sare ee dalka u gudbiyay mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha, kaasoo 12-kii bishii hore ay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka ka keeneen.
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay heleyso StarFm ayaa sheegaya in Guddoonka uu go’aan ku gaaray in mooshinka loo gudbiyo Madaxweynaha, kadib markii muddo labaatan cisho uu la yaallay, waxaana arrinta gudbinta Maxkamadda sare ay khilaaf ka dhex dhalisay Guddoonka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha.
Kulan muddo saacado badan qaatay oo xalay Madaxweynaha iyo Guddoonka Baarlamaanka yeesheen ayaa lagu kala kacay, waxaana ilo wareedyo ku dhow dhow Guddoonka ay xaqiijiyeen in Madaxweynuhu aanu markii hore raali ka aheyn in Guddoonka qabto mooshinka, isla markaana uu saluugsanaa in Maxkamadda loo gudbiyo.
Guddoonka Baarlamaanka ayaa kulankii Madaxweynaha ay ku kala tageen kadib waxay la kulmeen Xildhibaanadii mooshinka keenay, iyagoo ka wada hadlay qaabka suurta galka ah ee arrintan loo maareyn karo, kadib markii mudadii uu Guddoonka uu hor-yaallay mooshinka xal la gaari waayay.
Si kastaba ha ahaatee arrinta cusub ee ku soo korortay mooshinka Madaxweynaha ayaa loo arkaa inay xiisad cusub oo siyaasadeed ay keeneyso, iyadoo horay walaac looga muujiyay xiisadaha siyaasadeed ee uu dalku galay tan iyo markii Guddoonka Baarlamaanka loo gudbiFyay Mooshinka xil ka qaadida Madaxweynaha.